Labsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooLabsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)
Murtii keenya kanaan qabsoo itti fufuuf akka gargaaruufis qaama AJAJA WARAANAA OL’AANAA WBO (AWO – WBO) jedhamu hundeessuu keenya labsii kanaan ifa goona. Qaamni kun (AJAJNI WARAANAA OL’AANAAN WBO) Hoogganoota ABO kanneen hubannoo fi ejjennoo WBO kanatti amananii WBO waliin dhaabbatanii fi ajajootii WBO Zooniilee fi Godinoota garaa garaa (Kibba, Dhiha, Baha, Giddu-Galeessa, Kibba-Bahaa fi Kaaba Oromiyaa) kanneen humni isaan hoogganan sadarkaa Cibiraa gahe of keessaa qaba. Fuul-duraafis ulaagaa kanaan ofitti dabalaa deema. Isaanuma keessaa geggeessitootni qaamichaa (Dursaa fi Itti Aanaan) filaman.
This is a clear message all Oromos must heed!
Dhagahaa, qalbeeffadhaa, yaa Oromoo!
OLF murtii walfakkaataa akka dabarsuu abdii keenya!